Gen Xuud oo Baladweyne soo gaaray | KEYDMEDIA ONLINE
Gen Xuud oo Baladweyne soo gaaray
Hoggaamiyaha Jabhad la magac baxday Xaq-u-dirir oo ka dhisay gobolka Hiiraan Gen.Xuud ayaa soo gaaray magaalda Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Jabhadda Xaq-u-dirir ee looga dhawaaqay Baladweyne General Abuukar Xuud ayaa maanta soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isagoo la kulmay waxgardka iyo odayaasha magaalada Baladweyne.
Janaraalka oo ah nin howl gab ah, islamarkaana ka tirsanaa saraakiisha CXD ayaa gadood sameeyay kaddib markii Cali Guudlaawe loo doortay madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, waxaana Jabhadda uu hoggaamiyo ay sameeyeen bannaan-baxyo ay uga soo hor jeedeen imaashiyaha Cali Guudlaawe ee Baladweyne, iyadoo uu baaqday safarka Cali Guudlaawe uu ku tagi lahaa Baladweyne.
Jananka ayaa intaas wixii ka dambeeyay saameyntiisa sii badaneysay, waxaana dhowr jeer oo hore ugu tagay halka uu xarunta ka sameystay ee duleedka magaalada Baladweyne odayaal iyo wax garad kasoo jeeda Baladweyne.
Dhaqdhaqaayo xooggan ayuu weli ka wadaa magaalada Baladweyne isagoo maanta halkaas kula kulmay Odayaal iyo wax garad reer Baladweyne ah